Izibonakaliso ezinobungozi zezodiac: vavanya umchasi wakho
Ukufundwa kweenkwenkwezi, ngendlela efanelekileyo, kunokukunceda ngokuchanekileyo ukujongana nemibandela eninzi. Khangela nje ukuba ngubani okhethiweyo wakho ngomqondiso we-Zodiac, kwaye kuya kuba lula kuwe ukuba ucekise kwaye uhlale uthandana nawe. Ewe, ukuba usebenzisa inkwenkwezi ukwenzela ukwakha ubudlelwane kunye nomthandayo, nguwe kuphela oza kuwusebenzisa. Kodwa eqinisweni ngokuqhelekileyo ekugqibeleni kukho abaphikisanayo nabo bakulungele ukusebenzisa nayiphi na indlela ukuze bakunqande umntu kwaye bachithe ulwalamano lwakho.
Ukuba kukho ukuphikisana nokugqithisa, ungaphinda ubhekisele kwiinkwenkwezi. Inyaniso kukuba kuxhomekeke ekubeni ngubani ozoyihlosa i-zodiac yakho kwi-zodiac, ayixhomekeke kuphela ekuziphatheni kwakhe, kodwa nakwiimeko ezinzulu zeenjongo zakhe. Ngoko phambi kokuba utyhawule kwaye ulungelelanise kwangaphambili iziqholo, zama ukufumana uphawu lwe-zodiac ye-rival, oye wakhangela kwi-vampire yakho. Ngaloo ndlela, uya kukwazi ukuqonda uhlobo luni lomntu, nokuba lufanele lukhuselwe kwaye zeziphi izicwangciso zakhe ezinokwenzeka.
Abameli beempawu zomoya bazama ukuthabatha umfo ngaphandle kwendoda kuphela ngenxa yokungaphumeleli kwakhe kwintando yothando. Abafazi basemoyeni badla ngokudumala, kuba banika abantu babo iimpawu ezingenangqiqo, ezenziwa ngokuqinisekileyo.
Ukuba umchasi wakho yi-Zodiac Gemini, ungakhathazeki kakhulu, kuba eli bhinqa alithathi ngokungathí sina kwizinto ezithandwayo. Yinto eqhelekileyo, ngoko kunokuba ulwa nawe, kungcono ukufumana unyulo olutsha. Ukuba wakho umthandayo uye wayilumkela loo mfazi, ngoko ke waqala ukuthetha naye kwaye wakha amanxeba akhe njengeSirene. Kodwa ungakhathazeki, uxinzelelo lwayo luya kukwanela ixesha elide.
Inzondo-iLibra idibanisa kwaye inemfundiso efanelekileyo, ngoko kuya kuba yingozi. Eli bhinqa liza kuluhluza, awukwazi ukuyihoxisa kwingxoxo ecacileyo, kuba iLibyana njengamabango kunye nokuhlaselwa okuvulekileyo. Ngoko ukuba ufuna ukulahla i-rival, bonisa nje uxinzelelo kwaye iya kutshabalalisa ngokwabo ukufumana umntu ongekho sikhululekile.
Ama-Aquarians awanakudlabalalisa ubuhlobo. Eli bhinqa angasebenzisa owakhethiweyo njengomhlobo, kodwa hamba phambili kwaye udibanise ngamabomu ulwalamano lwakho aluyi kuthi. Akayinto engadingekile, njengoko sele eselonwaba ngokugqithisileyo kwesini esahlukileyo kwaye unamanqaku amaninzi.
Abasetyhini abasemkhosini weempawu zomlilo, kwindawo yokuqala, bazama ukuzimela.
Iingxabano-Aries ziyahlukana nokuzithemba. Lo mfazi usebenza kakhulu, uziphatha njengomzingeli wangempela. Ngoko ke, ukuba uyamthanda umntu wakho, uya kwenza konke okusemandleni ukuba amfumane. Ufanele uziphathe njani ukuze uhlwithe okhethiweyo wakho kwi-Amazon? Mkhuphe ngaphandle kwakho. Umfazi onjalo enomsindo uya kuba yintlanzi, ekhuseleyo, ekhanyela ngokupheleleyo amazwi kunye nezenzo zakhe. Ukuba umntu wakho ubona ubuso bakhe bokwenyani, ngokuqinisekileyo, yena ngokwakhe uya kufuna ukuphula ubudlelwane naye.
I-Razluchnitsa-Sagittarius ibalwa kakhulu. Uhlala ekulungele ukuvelana nomntu, ukuphulaphula izikhalazo uze uyiqonde ngexesha elifanelekileyo, ehlala isebenza kuye. Akunakutsholwa ukuba yena uqobo uxhoma entanyeni yakhe. Ukuziphatha okunjalo kubangela ukuba umntu ngokwakhe uza kuye. Kodwa lo mfazi unenkcitho enkulu kakhulu: uhlala efuna ukulawula yonke into, kuquka indoda yakhe. Ngako oko, ukuwunqoba, ukuziphatha ngokuchaseneyo, ungafumani apho kwaye kunye naye ungubani, uyeke ukukhankanya. Indoda iya kuqonda ngokukhawuleza umahluko.
Ukuba umchasi wakho ummeleli wamanzi, kufuneka uqaphele. La mabhinqa anemvakalelo kwaye ayimfihlakalo, isithandane kunye nesithandwa.
Inzondo ingelosi yangempela enyameni. Uziphatha ngokuthobeka kwaye angenakuzivikela, ngoko umntu oza ku-snea uya kuziva ngathi ungumdlali okhuselekileyo kunye nomkhuseli, ongenakukuthandabuza, ngokukodwa ukuba ungumfazi ozimeleyo ozimeleyo. Ukukrazula umchasi, ulwela umthandekayo wakho umqumbise. Ingelosi engenamacala i-maskabezzaschitnogo iyanyamalala ngokukhawuleza, kwaye ngokuphindaphindiweyo kuya kubakho umfazi ongenamagazi ongenamagazi, oza kuphazamisa loo ndoda ngokukhawuleza.
Umfazi waseSorpio uyingozi yerzluchnitsa.Ona real fatale. Uhlakaniphile kwaye unobungqingili, ngoko ke ukuba kufumaneke nawuphi na umntu kuye ngeke kube nzima. Njani na neboronsya? Unentsimbi emfutshane - umfazi waseSorpio unothando lwemali. Bonisa umthandayo umoya wakhe womoya kunye nomdla wakhe.
Intlanzi yoTywala ihlakaniphile kwaye iyinempilo, kodwa ihlaziye kwaye ayizinzile. Akunakude abe nomntu oyedwa, ngokukhawuleza aguqule kwabanye. Bonisa intanda yakho ngomoya kwaye uyatshintsha, kwaye inkolelo iya kuba yakho.
Eli bhinqa libala kakhulu kwaye lichanekile, likhaliphile kwaye liqaphele. Umlinganisela onke amagama, ubala zonke izenzo, ulungele ukuba ngumthunzi nje ngokufunayo, ulinde ixesha elifanelekileyo.
I-Taurus yintlonelo ihle, ilungiswe kakuhle kwaye ibalulekile ukuba ayikwazi ukunceda umdlalo. Uyazi ukulinda ixesha elifanelekileyo lokuhlaselwa. Kodwa i-razluchnitsa ngokuhamba kwesikhathi iya kufuna ukuzinza, kwaye iya kuqala ukufuna ukuba, ngokuqinisekileyo, indoda ayinakuyithanda.
Iindlovukazi zeVirgo azifaneki zilawule. Zilungile le nto, ngoko ke, loo mntu ngokwakhe akalithwa yi-Virgo. Ukuba inveli iyaqala, ithetha ukuba iNtombikazi inene yathandana.
Ibhinqa likaCapricorn, inokwenzeka, ayiyi kulwa nomfokazi. Uneminye imilinganiselo kwaye uyazama ukulungisa ubomi bakhe bokamva ebusheni bakhe.
Khumbula, kulwalamano lwakho kufuneka kube nothando nokuvisisana, inhlonipho nokuqonda. Emva koko umhlobo wakho akanakukuguqula umntu, kwaye iinqununu ezintle kakhulu ze-razluchnits aziyi kusebenza.
Yintoni enokuyilindela ukusuka ngomhla we-12.12.12?
Ziziphi i-ophthalmologists ezithetha malunga neelensi zokuxhumana?
Ityuwa yeenwele: iindawo zokupheka ezenziwe ngcono
Izikhelo kwimfundo yomntwana oneminyaka emithathu ubudala
Indlela ephakamileyo yabantu: iqoqo elitsha likaBalmain ngeH & M
Impembelelo yemo yowesifazane okhulelweyo
Ukupheka kwezitya ezivela kuma-mushroom aqholiweyo
Igazi eliphuma ekhaleni kubasetyhini abakhulelweyo
Iinkqubo ezithembekileyo zokukhulelwa komzimba
Isaladi yesatato ngeesibini zebhokhwe
Masks ebusweni kwindawo yokuhlamba: zokupheka kwabantu